Demisexuality - Talo Ku Saabsan Ragga Qaaliga Ah | Ragga Stylish
Waxaan uga hadli karnaa ereygan sidii hal sumad oo kale buugga ku qoro dabeecadda galmada ee nolosha qofka. Demisexuality waa eray aad u yar oo la yaqaan in ayaa bilaabeysa in loo adeegsado dad badan markay leeyihiin nooc ka mid ah jihaynta galmada ee ka duwan ereyada durba la beeray.
Waxaan ognahay heterosexuality, bisexuality, khaniisnimada iyo jinsiga sida ereyada la xiriira soo jiidashada galmada, xagga dadka isku jinsi ama jinsi kala duwan ama xitaa aan lahayn soo jiidasho buuxda. Taasi waa sababta ay u jiraan dad horeyba loogu soo qoray ereyga demisexuality, Waxay qirayaan inay yihiin dad soo jiidasho leh laakiin is casilaad cayiman.
1 Qeexitaanka demisexuality
2 Shakhsiyaddiisa qoto dheer:
3 Jinsi galmo ama jirro
4 Waa sidee cilaaqaadkaagu?
Demisexuality waa erey horey loo soo saaray tan iyo 2006, sida laga soo xigtay Shabakada Iskuxirka Waxbarashada Asexual iyo Muuqaalka (AVEN), halkaasoo ay u taagan tahay a qof dareen iyo soojiidasho galmo ku ah qof kale, laakiin kaliya iyo si gaar ah iyada oo aan marka hore la abuuro xiriir qoto dheer oo qiiro leh qofkaas.
Dadka noocan ah waxay ku socdaan wadadii loo noqon lahaa jinsi ahaan, Haddii kale, waa sababta oo ah waxay dhammaystiri karaan galmo ahaan, laakiin had iyo jeer waxay abuurayaan isku xirnaanta xasaasiga ah iyo saamaynta.
Waxaa la fahansan yahay in xaqiiqadani sida caadiga ah ay xaqiijinayso inay jiraan dad badan oo leh dareenka noocan ah, taasi waa, waxay dareemayaan soo jiidasho kacsi, laakiin waa inay ku xirnaataa xiriirkaaga shucuureed. Runtu waxay tahay inay run tahay, laakiin dadka lab iyo dheddigba waxay u baahan yihiin inay yeeshaan qaab aad u kacsan oo shucuur leh si loo ilaaliyo xiriirka.
Shakhsiyaddiisa qoto dheer:
Badanaa ma dareemayaan nooc soo jiidasho jinsi kasta, inkasta oo sida muuqata uu jeclaan karo qof kasta. Laakiin maadada jir ahaaneed waa mawduuc xaaraan ah iyagaWaxaa laga yaabaa inay tahay wax iyaga la socday noloshooda oo dhan, ama laga yaabee inay noloshooda ka dhigtay inay dib uga fiirsadaan fal sidan oo kale uga noqday.
Dhammaan cawaaqibyadan, ma jiro mid qiil u heli kara xilligan la joogo waxa qof noocaan ah dareemi karo. Badanaa qofkan ma dareemayo soojiidasho la'aan jacayl. Jaleecada hore awood uma laha inay dareemaan rabitaan galmo, xitaa haddii qofkani yahay mid aad u muuqda ama qurux badan. Dareenkaaga ayaa la been-abuuri doonaa muddo ka dib, gudaha qofkaas, oo leh isku xirnaanta shucuurta ka dhexeysa labada iyo marka arrimaha oo dhan loola dhaqmo si ka wanaagsan, heer ruuxi ah.
Tan waxaan ula jeedaa haddii qofku u guuro sababo jira awgood, demisexual-ka ma seegi doono wax badan, waxaa laga yaabaa in isku xidhka yar ee uu ilaaliyay uu mar kale qaboobo.
Taas macnaheedu maaha in qofkaan lagu nacayo mowduuca galmada, waxaa laga yaabaa inaad ku raaxeysatid waxqabadyo jinsi oo keli ah sida siigaysiga ama daawashada waxyaabaha qaawan. Waxaa laga yaabaa inaad halkaan ka qiyaasto xaaladaha aad jeclaan lahayd inaad la wadaagto qofka aad saadaalinayso.
Jinsi galmo ama jirro
Waxay yihiin laba xitaa erey, oo leh cawaaqib isku mid ah iyo mid isdhaafsi ah. Waa qaab isku mid ah oo loogu yeedho qofka noocaas ah.
Waa dad kuwaas kalabar u dhexeeya galmada iyo galmada, maadaama jinsigu aanu ahayn ishaada ugu muhiimsan ee lagu ilaaliyo xiriirka araga hore. Sidoo kale iyagu ma ahan kuwo aad u neceb damaca jidhka, maxaa yeelay mustaqbalka waxay ilaalin karaan heer galmo qofka lala doonayo, laakiin had iyo jeer heer hoose, maadaama aysan ahayn hamigiisa ugu weyn.
Si aad si fiican ugu sharaxdo sida ku cad AVEN, kala badh jawaab bixiyayaashu waxay wadaagi jireen dareemida danayn la xiriirta galmada, halka qeybtii kalena ay ilaalinayeen dabeecad wanaagsan, kaliya 16% ayaa gebi ahaanba laga diiday ficil galmo.
Waa sidee cilaaqaadkaagu?
Dadka badankood waxay dareemaan nooc soojiidasho ah daqiiqadda ugu horreysa, taas oo keenta inay yeeshaan xiriir galmo qaab cawaaqib leh. Demisexuals-ku sidaa uma dhaqmaan Way ku adag tahay inay la kulmaan xaaladdan haddii ay si adag u garan waayaan qofka kale.
Marka jawaab togan oo qof kale ah ay soo baxdo, waxay qaadan kartaa waqti dheer iyo xitaa sanado in la dareemo soo jiidasho galmo markii ugu horeysay. Waxay ilaalin doonaan sida dareenkoodu u soo toosiyo waqtiga ama noloshooda.
Gunaanad si macquul ah uma soo koobi karno dhammaan qaababka iyo qaababka ku saabsan rabitaanka galmada. Kaliya shuruudaha horey loo ogaa ee jira ayaa ah kuwa si macquul ah dad badani u dabooli karaan, sababtoo ah muuqaal ahaan qaabeysan iyo galmo sax ah.
Marka laga hadlayo milicsiga ugu dambeeya, waxaa lagu soo gabagabeynayaa waxaa jira shakhsiyaad dareemaya soo jiidasho iyo rabitaan aragga koowaad, kuwa kale oo aan ogahay jacayl si fudud u dhici, kuwa kale oo si gaar ah u xulan doona, iyo kuwa kale oo si dhib leh u dareemi doona soo jiidasho noloshooda oo dhan. Qof kastaa wuxuu xor u yahay inuu dareemo oo uu la kulmo kala duwanaanta galmada. Qof kastaa wuu ka duwan yahay, laakiin taasi macnaheedu maaha in loo aqoonsado inay ka fiican yihiin ama ka xun yihiin bulshada inteeda kale. Tani waxay kaa dhigeysaa qof gaar ah waana sababtaas Waa inaad xor ka ahaataa galmadaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Demisexuality
Daaweynta guriga ee calool fadhiga